Sidee ayaan ku milmaan, lagu biiriyo ama ku biiro dhowr videos galay file hal
> Resource > Video > A Good iyo Reliable Video Multiplexer
Waxaan u malaynayay ma ahan markii ugu horeysay ee aad naftaada la weydiiyay sida aad ku milmaan yaabaa, isu geeyo, ku biiro ama ka badan farsamo ahaan hadlayay, multiplex dhowr videos wada galay mid ka mid file keliya ee waa la gubi karaa sida DVD ah. Waxaad dooran kartaa si loogu badalo iyo haddii aadan samayn, malana hayo oo dhan oo iyaga ka mid faylka sida oo qaab ISO ah badbaadin sidoo.
Haddii aad ku cusub tahay tan, ha igu kaa caawin galay helitaanka madaxa ku bilaabatay. The Wondershare Video Converter Ultimate waa wanaagsan oo la isku halayn karo multiplexer video Timid khariidad fudud oo waa user-friendly, gaar ahaan bilowga ah. Natiijadan ayaa waxa ay final, si kastaba ha ahaatee, waa wax gaaban oo video ah oo uu soo saaray pro ah.
Markii aan wanaagsan oo la isku halayn karo leh, naftaada iyo hubaal qaar ka mid ah oo si xor ah u dejisan iyo isku day version maxkamadda haddii ay ku nool ilaa filasho! Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah tallaabooyinka ay kugu hanuuniyo laga yaabaa oo ay la socdaan nidaamka haddii aad rabto inaad ku biirto, isu geeyo, ama ku biiro multiplex dhowr videos wada.
Haddii aad u baahan tahay si loogu badalo aad video files, markaas waxaad u baahan doontaa inuu ku soo bilowdo ka tallaabada ugu horraysa. Haddii kale, u gudub kan labaad. ( muuqaalada ayeey la heli karaa haddii aad jeclaan doonaa si jar ama noola video ah).
1 Beddelaan files hor video multiplexing
Ka sokow isagoo heerka diinta degdeg ah, ee Wondershare Video Converter kama dambaysta ah oo u ogolaanaya diinta Dufcaddii. Waxaad si fudud u soo jiidi kartaa ama geliyaan oo dhan videos in aad jeclaan doonaa in la biireen, marka la isku daro, ku soo biiray ama multiplexed ku riday badalo screen tab ee.
Waxaa jira qaabab kala duwan oo la heli karo wax soo saarka diinta ka hoos qaybaha jecel , Qaabka iyo Device . Dooro mid ka mid ah kaas oo ku habboon qalab aad.
2 darsamaan, Isku dar, biir ama Multiplex Videos
Ka dib markii ay diinta oo dhan videos ah, waxa aad helaysaa in ay dib-u-soo jiitaa ama geliyaan ee la gediyay videos u geliyey Gubashada tab. Software ayaa waxaa sidoo kale ka buuxaan muuqaalada tafatirka muhiim ah haddii aad sida falinjeeerka, lana siii ama xitaa ku dar saamaynta qaar ka mid ah si ay u dareemaan.
Riix halkan si akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo edit aad video. Waxaad dooran kartaa in aad xaalkaa video hor iyo ka dib qaab beddelidda labadaba.
3 Save multiplexed video sida file ISO ah ama gubaa siduu DVD
Waxaa jira in ka badan hal fursad si aad ula wadaagto videos agagaarka! Waa maxay sababta aan ku gubi dibadda u bixin sida DVD ama badbaadin sida file ISO ah oo ka dib? Waa kuma sidii ay adag tahay sidii waxa aad u malaynayso, aan gaar ahaan marka aan soo jiidasho badan uga muuqato wax walba oo aad u sahlanaato.
Dooro habka aad jeceshahay doonaa si uu u badbaadiyo multiplexed videos. Ma jeclaan lahayd inaad ku gubi dibadda u bixin sida DVD ah ama ku kaydsan sida file ISO ah?
Waxaa jira goobo dheeraad ah oo diyaar u ah labadaba sida DVD ama ISO file (NTSC ama Pal u heerka TV).
Talaabada ugu dambaysa waa in la shakhsiyeeyo aad DVD menu. Kulanka template si aad style ama warqadda asalka music in ay ka farxiyaan aad dhagaystayaasha inta lagu guda jiro doorashada menu.
Haddii aad dareento sida isagoo tababar dheeraad ah oo ku biirtay, isku, wada ku biiro ama multiplexing dhowr videos laakiin ma doonayo in aan isku ciyaartid aad hadda jira faylasha video. Waxaad isku dayi kartaa iyaga online duuban.
Waxaad u baahan doontaa in guji download icon in booda xaq ku xusan video ah in uu ciyaaro loo siiyaa biraawsarkaaga, ama aad ku haboon nuqul karo iyo paste URL ee. Dooro Beddelaan in haddii aad u baahan tahay beddelida AMA kaliya tagto Gubashada in DVD . Inta kale waa celis ah oo ka mid ah tallaabooyinka kor ku xusan.